10 Ebe kacha agba agba n'ụwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebe kacha agba agba n'ụwa
Train Travel Denmark, Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Ụgbọ okporo ígwè njem Poland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 29/10/2021)
Ezochiri anya n'ebe igwe mmadụ na-eme njem nlegharị anya, ndị a 10 ebe kacha mara mma n'ụwa, na-akpali akpali n'ezie. Ndị na-ese ihe na ndị ode akwụkwọ achọtala mkpali n'ebe ndị a mara mma. Ya mere, akụkọ ifo na-emezu, na ịga na nke ọ bụla n'ime ebe ndị a ga-abụkwara gị ahụmihe na-agbanwe ndụ.
1. Ebe kacha agba agba n'ụwa: Cinque Terre, Italy
Ụbọchị oyi isi awọ ma ọ bụ ụbọchị okpomọkụ na-acha anụnụ anụnụ, Cinque Terre na -acha na ihu igwe ọ bụla. Ụlọ ndị mara mma nwere echiche nke oké osimiri na-acha anụnụ anụnụ ma mepụta foto kachasị mma. Ọzọkwa, Obodo ọ bụla ị gara na Cinque Terre na-ama mma karịa nke ọzọ, na ụlọ na -acha odo odo, pink, uhie, na ụda oroma.
Ya mere, yana oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ na ugwu nta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, Mpaghara Cinque Terre na Italy bụ otu n'ime ebe kachasị agba n'ụwa. Njem a mara mma na-amalite n'ezie na obodo La Spezia, nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na ebe ọpụpụ nke ụgbọ oloko Cinque Terre. Ịga ụgbọ oloko na -agagharị na Cinque Terre kacha mma ebe ụgbọ oloko na -agafe obodo ọ bụla, yabụ ị nwere ike ịlaghachi ebe ọ bụla oge ọ bụla ịchọrọ n'ụbọchị.
La Spezia gaa Riomaggiore Na ụgbọ oloko
Florence gaa Riomaggiore Na ụgbọ oloko
Modena gaa Riomaggiore Na ụgbọ oloko
Livorno gaa Riomaggiore Na ụgbọ oloko
2. Ubi Tulip, Mba netherland
Pink, ọcha, oroma, odo odo, Ogige tulip Holland bụ anwansi na agba niile nke egwurugwu. Ebe kacha mma ịhụ ubi tulip dị ịtụnanya dị na Keukenhof ma ị nwere ike nwee mmasị na ịma mma n'efu. Ubi ndị ahụ dị ịtụnanya na -ewe nkeji iri na ise site na Keukenhof. Otú ọ dị, Mma dị ụkọ n'ezie na-aga n'ihu maka nkeji iri na ise ọzọ ruo ọbụna tulips mara mma karị.
Nwere ike ịnụ ụtọ echiche a mara mma n'etiti Eprel ruo etiti Mee, n'oge tulips’ otuto. Nnukwu ubi tulip bụ njem dị mkpirikpi si Amsterdam, ya mere ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ụbọchị njem na Netherlands’ obodo. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe dị ka ndị obodo iji nwee mmasị na ifuru na-akpali akpali.
3. Ebe kacha agba agba n'ụwa: Menton Cote D'Azur, France
N'ọmarịcha osimiri French Riviera, mana pụọ ​​na paparazzi na Monte Carlo, Menton bụ ọmarịcha obodo gbara osimiri okirikiri. Belle Epoque pastel ụlọ, gbakwunye na ịma mma nke obodo a na-arọ nrọ ma mee ka onye ọ bụla bịara na nke mbụ nwee mmasị.
Ị nwere ike nweta Menton site na ebe ọ bụla na France ma ọ bụ Italytali ebe ọ dị nso na oke Italy. Cote D'Azur bụ mpaghara mara mma na France ma na -eme nnukwu ebe maka ebe izu ike. Ya mere, na mgbakwunye na -eme nnukwu eserese n'azụ obodo ahụ mara mma, ịga njem bụ ụzọ dị mma iji nọrọ ezumike dị ịtụnanya na Menton.
Aha obodo n'ime obodo, na etiti obodo ochie Pelourinho dị na Salvador bụ otu n'ime ebe mara mma na gburugburu ụwa. Ebe a na -ere ahịa ịgba ohu ugbu a bụ ebe kacha agba agba na ndụ na Salvador. Mpaghara ahụ nwere ọmarịcha facade nke ụlọ ndị colonial ma bụrụ ebe obibi nke ndị na-ese ihe, egwú, na nnukwu ndụ abalị.
Ọzọkwa, Pelourinho mara mma bụ ebe ọdịbendị ebe ị nwere ike ịmụ gbasara ihe nketa Brazil na Africa. The nnukwu ụlọ oriri Na Pelo na-enye nri dị egwu sitere na nri abụọ ahụ. Ya mere, mgbe ịmechara ịzụ ahịa ihe ncheta n'ọtụtụ ụlọ ahịa ejiri aka mee gburugburu, ị nwere ike nụrụ ụtọ ebube nri sitere na nri ndị Africa na Brazil.
5. Ebe kacha agba agba n'ụwa: Wroclaw, Poland
Obodo kachasị na Western Poland, Wroclaw bụ otu n'ime ihe bara nnukwu uru zoro ezo nke Poland. Wroclaw bụ ihe mara mma èzí-na-eti-ụzọ ebe na Europe, na ihe owuwu ya mara mma na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị mara mma n'obodo na Europe. Ọcha kacha mara mma n'ahịa ahịa mgbe ochie, ebe ị nwere ike were ọnọdụ ikuku dị n'otu n'ime ụlọ oriri na ọ aroundụ aroundụ ndị gbara ya gburugburu.
Ya mere, dị njikere ijide igwefoto gị na ezigbo akpụkpọ ụkwụ na -eje ije maka ịgagharị n'okporo ụzọ ndị mara mma na obodo ochie. Site n'oge oyi ruo n'oge ọkọchị, Wroclaw nwere agba ga -ekele gị nke ọma, na Polish pierogi jupụtara na poteto, cheese, ma ọ bụ mkpụrụ osisi.
Otu n'ime agwaetiti atọ a ma ama na nso Venice, Burano bụ nke mara mma n'etiti agwaetiti atọ mara mma nke Italy. A njem ụgbọ mmiri pụọ na ala ala, Ụlọ ndị Burano na-egbuke egbuke dị mma ebe ezumike na-apụ apụ. Mgbe ị nwere ike gbaa agwaetiti ahụ gburugburu 2 awa, ị ga-emecha nọrọ otu ụbọchị dum, naanị ịse foto.
Ndị na-akụ azụ̀ ahụ mara mma n'akụkụ àkwà mmiri ndị ahụ yana ọtụtụ ọwa mmiri na-agbakwunye na ịma mma Burano. Nke a na-agbakwunye na foto dị ka kaadị ozi nke otu dị n'elu 5 ebe mara mma na Europe. Nleta na Burano bụ njem ụbọchị site na Venice, ọ dị mma maka ịzụ lace na ihe ọ afternoonụ Apeụ Aperol n'ehihie ọdọ mmiri Venetian.
Iji ụgbọ okporo ígwè aga Florence na Milan
Milan na Florence na ụgbọ oloko
Venice ka Milan Na A Train
7. Ebe kacha agba agba n'ụwa: Nyhavn, Copenhagen
Ọdụ ụgbọ mmiri mara mma n'otu oge kpaliri otu n'ime akwụkwọ ụmụaka kachasị ukwuu ka o dee Princess and the Pea. Ee, mba. 20 Ụlọ obodo bụbu ụlọ Danish Hans Christian Andersen. Nyhavn mara mma bụ ọdụ ụgbọ mmiri etiti na-ekpo ọkụ, ebe ị na-anụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri’ na-akpọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ ọ bụla.
taa, Nyhavn emezigharịrị bụ ebe ndị obodo na-abịa izu ike na njedebe nke ụbọchị. Nri abalị na egwu jazz, na-ekiri ọdịda anyanwụ n'elu ụgbọ mmiri na ụlọ ndị mara mma, bụ ahụmahụ dị ịrịba ama.
Na ọnụ ụzọ, mgbidi, na elu ụlọ dị na agba dị iche iche, Obodo Guatape bụ obodo kacha mara mma na Colombia. Obodo a mara mma bụ obodo ezumike na Colombia, nwere echiche dị egwu na ugwu. Ya mere, maka ịtụnanya ele obodo ahụ dum na agba ya, Ị nwere ike ịrịgo na La Piedra del Penon, na n'elu 740 na-eme ka echiche magburu onwe ya nke ebe mara mma n'ụwa na-emeghere gị.
Otú ọ dị, akụkụ kacha egbuke egbuke nke obodo ahụ dị na Zocalos, akụkụ ala nke ụlọ. Zocalos bụ ihe ịchọ mma ejiri aka mee, ụfọdụ eserese anụmanụ ma ọ bụ ifuru, na ndị ọzọ bụ nnọọ ihe ịchọ mma mara mma. ikwubi, hazie ma ọ dịkarịa ala ụbọchị ole na ole’ njem na Guatape ka ị nwee ike inyocha okporo ụzọ kacha mma na nke mara mma n'ụwa.
9. Ebe kacha agba agba n'ụwa: Colmar, France
Ụlọ ndị nwere ọkara osisi mara mma, ọwa mmiri a na-achọ ifuru, Colmar bụ obodo French mara mma ebe akụkọ ifo na-adị ndụ. Ọwa mmiri ndị mara mma ga-eduga gị n'ụzọ ndị mara mma n'ime oghere ndị mepere emepe. Ebe a, ndị na-akụ azụ̀ na-anọdụ ala na-ekwu banyere ihe omume ụbọchị na akụkọ banyere oké osimiri.
Ị nwere ike ịga Colmar site na Basel na Switzerland ma ọ bụ obodo ọ bụla dị na France, ụgbọ okporo ígwè. Ya mere, debe nleta na Colmar na njem ezumike nke Europe gị. Nhọrọ ọzọ dị mma bụ iji ezumike gị dum naanị na Colmar. Nke ọ bụla, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Colmar ma ewezuga ịse foto nke ebe mara mma na France. Ọmụmaatụ, na-akwọ ụgbọ mmiri, ịzụ ahịa n'ahịa kpuchiri ekpuchi, na-atọ ụtọ mmanya Alsace.
Paris ka Colmar nwere ụgbọ oloko
Zurich gaa Colmar nwere ụgbọ oloko
Stuttgart gaa Colmar nwere ụgbọ oloko
Luxembourg na Colmar na ụgbọ oloko
Ezoro ezo na ndagwurugwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, dị nnọọ 2 awa site na Tangier, bụ Chefchaouen kacha dị oke ọnụ ahịa ma dị oke ọnụ ahịa. Na-ese na-acha anụnụ anụnụ na ọcha, na yi decorations, Chefchaouen bụ ebe na-egbuke egbuke na Morocco. Yiri àgwàetiti Gris Santorini, okporo ụzọ ndị mara mma na ihe owuwu na-adọta onye njem kacha njọ.
Akụkọ mgbe ochie na-ekwu na nhọrọ agba pụrụ iche malitere laa azụ na narị afọ nke 15 mgbe ndị Juu bi n'obere obodo a. Ya mere, agba anụnụ anụnụ na-anọchi anya mbara igwe na njikọ ya na chi. Ebe ndị Juu abụghịzi ndị bi n’obere obodo a, otu o sila dị, ebe ahụ chekwara ịma mma ya n'ime afọ niile. taa, obere obodo a na-adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta, ya mere dịrị njikere izute igwe mmadụ nwere obi ụtọ n'akụkụ akụkụ ọ bụla na-acha anụnụ anụnụ.
Anyị na Save A Train ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị 10 ebe kacha mara mma n'ụwa.
Ịchọrọ itinye blọgụ anyị "Ebe 10 Kacha Mma n'ụwa" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-colorful-places-world%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na-acha ColorfulCities ColorfulPlaces ColorfulTowns Mostcolorfulcitiesineurope mostcolorfulplacesworldwide
Nice ejị na ụzọ Nweta E
Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Train Travel Switzerland, Ingbọ njem njem Turkey, Train Travel UK, Travel Europe